10 Steps to startaSmall Business — Balance Professional Services
လုပ်ငန်းသေးတစ်ခု စတင်ခြင်းရဲ့ အဆင့် (၁၀) ဆင့်
အစိုးရကနေထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက်များမှ သိရတာကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးရဲ့ 90% မှာ ပုဂလိကလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စား(SMEs) လုပ်ငန်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် SMEs လုပ်ငန်းများပိုမို ဖွံ့ဖြိုးလာတာ၊ လူတွေစိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• Grab and Go, CoCo, ABC အစရှိတဲ့ convenient stores များ
• Travel Agency များ
• Mobile Sale and Service shop များ
• Tuition Center, Training Center များ
• Mobile Food Stations များ
• Online Shop များ
• Tea Stall (မေမြို့ win coffee), Tea Shops များ
• မာလာရှမ်းကောဆိုင်၊ Hot Pot Buffet ဆိုင်များ
လူတွေတော်တော်များများ လုပ်လာကြသော်လည်း SME Business တွေရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက် ၂နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲ ပိတ်သွားတာ၊ ကျရှုံးသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲတော့ SME Business စလုပ်တဲ့အခါမှာရော၊ လည်ပတ်နေတဲ့အခါမှာရော၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ “အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ” ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ လုပ်ငန်းစပြီးတည်ထောင်ကတည်းက စနစ်တကျ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ လုပ်နိုင်မှ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှာပါ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အောင်မြင်တဲ့ SME Business တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လို တည်ထောင်ကြမလဲ ဆိုတာကို တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
Step 1: Do Your Research (သေချာလေ့လာသုံးသပ်ပါ)
မိတ်ဆွေဆီမှာတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ Business Ideas တွေရှိကြမှာပါ။ အဲဒီ Business Idea ကိုလက်တွေ့ကျကျ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ ကိုယ့်ရဲ့ Idea ကတကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လား? လုပ်ငန်းကို အလောတကြီးစမလုပ်ခင် အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိ/ မရှိဆိုတဲ့ သက်သေသာရကတွေ၊ အထောက်အထားတွေ ရှာဖွေထားသင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်လာဖို့ဆိုတာက
ကိုယ့်လုပ်ငန်းက လူတွေရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ လိုနေတာတစ်ခု ရောင်းပေးနိုင်ရမယ်။
အဲဒါတွေ သိနိုင်၊ မြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Products ၊ Services တွေကို ဈေးကွက်ကနေ လိုအပ်နေသလား? ဘယ်လိုလူတွေက လိုနေတာလဲ? ကိုယ်ရဲ့ Products တွေ၊ Services တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတွေရှိနေလား? ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုက ဘယ်လိုရှိမလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကရော ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာရနိုင်မှာလား?
ဥပမာ။ ။ အခုလတ်တလောအမြင်နဲ့ ပြောရရင် မာလာရှမ်းကောဆိုင်၊ Hot Pot ဆိုင်တွေအရမ်းများလာပါတယ်။ အဲလိုများလာတဲ့အတွက် ကိုယ်က အဲလိုဆိုင်မျိုးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တောင် သူများထက်မထူးခြားနားပဲ ဒီတိုင်း ဖွင့်လို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ကိုယ်ကသူတို့ထက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲ?
ဈေးနှုန်းလား၊ အသားတွေရဲ့ Quality လား၊ ဝန်ဆောင်မှုလား၊ အရသာလား၊ ဆိုင်အပြင်အဆင်လား၊ နေရာထိုင်ခင်းတွေလား အစရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းမစခင်ကတည်းက သေချာလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
Step 2: Make A Plan (Plan တစ်ခုချမှတ်ပါ။)
ကိုယ့်ရဲ့ Ideas တွေ လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့အတွက် Plan တစ်ခုလိုပါတယ်။ Business Plan ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီး လည်ပတ်နေတဲ့အချိန်သာမက လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့အထိ လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ Blueprint တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Business Plan ရေးရခြင်းက
• ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထင်သာမြင်သာရှိအောင်
• ကိုယ့် Ideas တွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေပေါ်လွင်အောင်
• မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အချိန်မီချမှတ်နိုင်အောင်
Step 3: Plan your finances (ငွေရေးကြေးရေးစီမံခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း)
Small Business တစ်ခုစတင်တာဟာ ငွေတွေအများကြီးမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းစတင်တဲ့အခါမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ငွေပမာဏတစ်ခုရယ်၊ လုပ်ငန်းအမြတ်မရခင်မှာ လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိလောက်တဲ့အထိ ငွေပမာဏ တစ်ခုရယ် လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို အကြမ်းချတွက်ကြည့်ပါ။
ဥပမာ။ ။ လိုင်စင်တွေ၊ ပါမစ်တွေ၊ Company မှတ်ပုံတင်ကြေးတွေ၊ အိမ်ငှားခတွေ၊ ပစ္စည်းဝယ်ခ/ငှားခတွေ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းခတွေ (Laptop, ပရိဘောဂ အစရှိသဖြင့်)၊ ဖွင့်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးရင် လုပ်ငန်းအနည်းဆုံး ၁ နှစ်လည်ပတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်း တွက်ချက်ထားရပါမယ်။ ဥပမာ- မီတာခ၊ ဖုန်းဘေ၊ အင်တာနက်ဘေ၊ ဝန်ထမ်းလစာ၊ Bonus၊ ခရီးသွားစရိတ်တွေ၊ Marketing and Advertising အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း Production အတွက် အသုံးစရိတ်တွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ၂ ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ပထမဆုံး အနေနဲ့လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံရမယ်ဆိုတဲ့ ငွေပမာဏတစ်ခုကို အကြမ်းဖျင်းသိလာမှာပါ။
Step 4: Choose A business Structure (လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံရွေးချယ်ခြင်း)
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို တစ်ဦးထဲပိုင်လုပ်မှာလား? Business Partner နဲ့လုပ်မှာလား? Company ဖွဲ့မှာလား စတဲ့အချက်ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာမူတည်ပြီး တာဝန်တွေ၊ ခံစားခွင့်တွေ၊ အခွန်ပေးဆောင်ရတာက အစ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာတော့ အကောင်းနဲ့ အဆိုး (၂) ခုလုံးရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မရွေးချယ်ခင် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့လည်း တိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Step 5: လုပ်ငန်းအတွက် နာမည်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
လုပ်ငန်းအတွက် နာမည်ရွေးချယ်တာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်မဲ့၊ လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ ရွေးချယ်တဲ့နာမည်တွေက လိုက်ဖက်မှုရှိရပါမယ်။
ဥပမာ။ ။ ကွမ်းယာဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ပြီး ခေါ်ရခက်တဲ့ English နာမည်တွေပေးတာမျိုး၊ Fine Dining Restaurant ကြီးဖွင့်ပြီး ပေါက်ကရနာမည်တွေ ပေးတာမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး။
နာမည်မပေးခင် သေချာရွေးချယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ Potential Implication (ဖြစ်လာနိုင်သောဂရက်များ)ကို တွက်ဆထားရပါမယ်။
ဥပမာ။ ။ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးတွေ၊ အခြားသူတွေနဲ့ ညှိစွန်းတဲ့နာမည်တွေကို မပေးသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် နာမည်တစ်ခုရွေးချယ်ပြီးရင် ရွေးထားတဲ့နာမည်နဲ့ တခြားကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေရှိ မရှိလည်း စစ်ဆေးကြည့်ရပါမယ်။ မရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကို မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းသင့်ပါတယ်။
Step 6: ပါမစ်တွေ၊ လိုင်စင်တွေ လျှောက်ထားခြင်း
လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းအတွက် လိုင်စင်တွေ၊ ပါမစ်တွေ လျှောက်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ စည်ပင်မှာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တင်ခြင်း၊ Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း အစရှိတာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးလိုအပ်တာတွေက ပြောင်းလဲသွားတာပါ။
ဥပမာ- Beer Station ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ယစ်မျိုးလိုင်စင်၊ အရက်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်တွေ၊ ပါမစ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆေးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆေးရောင်းချခွင့် ပါမစ်တွေ၊ လိုင်စင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
Step 7: ကောင်းမွန်တဲ့ Accounting Format/ Accounting System ထားပါ။
Small Business တွေကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ System (နည်းစနစ်)တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ System တွေမှာ အရေးကြီးအခရာကျတာကတော့ Accounting System (စရင်းအင်းစနစ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ ဝင်ငွေတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ပေးရန်/ရရန်တွေ၊ အရှုံး/အမြတ်စာရင်းတွေ၊ အခွန်ဆောင်ဖို့တွေ သိချင်တဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ Accounting System တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်ရင် စာရင်းကိုင် (Accountant) ငှားသင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း Accountant မငှားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း Accounting Firm တွေ၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူတွေရဲ့ အကူအညီတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေ ရယူသင့်ပါတယ်။
Step 8: လုပ်ငန်းတည်နေရာရွေးချယ်ခြင်း
လုပ်ငန်းနေရာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတည်နေရာနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိသလား ဆိုတာကိုလည်း သုံးသပ်ရပါမယ်။
ဥပမာ။ ။မြို့ထဲလူနေရပ်ကွက်ထဲမှာ အုတ်၊ ထုံး၊ သဲ၊ ကျောက် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သားရေလုပ်ငန်းများ လုပ်မယ်ဆိုပါက အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာထိုင်ခင်းက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Parking (ကားပါကင်) လွယ်သလား၊ လမ်းကျဉ်းလား/ကျယ်လား၊ သွားရလာရတာရော လွယ်လား အစရှိသဖြင့် စဉ်းစားပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတည်နေရာကိုလည်း ဝယ်မလား၊ ငှားမလား ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Step 9: ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းခြင်း
ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူမယ်ဆိုပါကလည်း လုပ်ငန်းမစတင်ခင် ကြိုတင်ရှာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရာထူးများ၊ ရာထူးအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း အချိန်ယူပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ခွဲခြား ထားပေးပါ။ ဝန်ထမ်းတွေ ခေါ်ယူဖို့မလိုဘူး၊ တစ်ယောက်ထဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ဖို့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၊ နောက်ဆုံး မိသားစုဝင်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Step 10: လုပ်ငန်းအတွက် Marketing and Promotion များပြုလုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ပြီဆိုရင် ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေ၊ ဖောက်သည်တွေကို စတင်ဆွဲဆောင်ရပါတော့မယ်။ ကိုယ့် Products ၊ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ အားသာချက်များကို Customers တွေသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ- Billboard တွေနဲ့ ကြော်ငြာမှာလား? Television Channel (ရုပ်သံလိုင်း) တွေမှာလား? Social Media တွေမှာကြော်ငြာမှာလား?
ကိုယ့်လုပ်ငန်း ငွေကုန်သက်သာပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံသွားမှာပါ။ နေ့ချင်း ညချင်းတော့အောင်မြင်မှုက ရောက်လာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ နှစ်မြှုပ်ပြီး လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။
ထက်ခိုင် (Business Development), ရဲရင့် (Client Success)